राेचक खबर Archives - Page 148 of 155 - Purbeli News
एउटी पत्नीको यस्तो सरल प्रश्न आफ्नो पतिलाई
दुनिया पत्नीको मजाक उडाउँछन् श्रीमती शिर्षकमा लेखिएका कैयौं घटिया SMS हरू ग्रूपहरूमा पठाउने गर्दछन् । वहाँहरू सबैलाई....! एउटी पत्नीको सरल प्रश्न आफ्नो पतिलाई...... देह मेरो हल्दी तिम्रो नामको हत्केला मेरो मेहेंदी तिम्रो नामको शिर मेरो चूनरी तिम्रो नामको सिउँदो मेरो सिन्दूर तिम्रो नामको निधार मेरो टिका तिम्रो नामको नाक मेरो नत्थी तिम्रो...
यो हो ११ करोडको कुकुर ! के छ यसमा खास ?
लन्डन । आयरल्यान्डको प्रहरीले एउटा शिकारी कुकुरको चोरी गरेको अभियोगमा चार जनालाई गिरफ्तार गरेको छ । बीबीसी हिन्दीका अनुसार यो कुकुरको मूल्य १० लाख युरो अर्थात् ११ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको क्लेयर्स रकेट नामको यो शिकारी कुकुर टिपरेरी जिल्लाको गोल्डन गाउँबाट चोरिएको थियो । प्रशिक्षकको साथमा रहेको बेला उक्त कुकुरको चोरी भएको थियो । यो चोरीको तुलना...
बर्षौ देखि गाडिएको युवतीको चिहानबाट अहिलेसम्म पनि आउछ सुगन्ध
भुत प्रेत तथा आत्मा तथा भगवानहरुको विषयमा समाजमा सदैव मतभेद रहँदै आएको छ । कतिले भूत हुन्छ भन्छन् त कतिले भुतको कुरालाई सिधै नकार्छन् । तर कहिलेकाहीँ यस्ता घटनाहरु घट्छन् जसबाट स्विकार्न बाध्य भइन्छ की प्रकृतिमा केही न केही यस्तो अलौकिक शक्ति चाहीँ छ । अफ्रिकी देश यमनमा पनि यस्तै घटना भयो जसका कारण त्यहाँका मानिसहरु आशचर्यचकित बने । यो घटना यम...
यी हुन् विश्‍वका सबैभन्दा महँगा जिन्सहरु (फोटो फिचर)
एजेन्सी । जिन्सको कपडा विश्‍वमै सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने गरेको छ। जिन्सको कपडालाई सबैले मन पराउन थालेपछि यसको मूल्‍य पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। यही कारण यसको मूल्‍य पनि वि्‍वमै महँगीको सूचीमा पर्ने गर्दछ। विश्‍वमा सबैभन्दा महँगो जिन्सहरु यस प्रकार रहेको छ। १. ब्राण्ड: सेक्रेट सर्कस यो जीन्‍सको मूल्‍य करीब ८.६ करोड रुपैंयाँ पर्दछ। यो जिन...
छोराको हेयर स्टाइलको कारण गयो बाउको हुँदाखाँदाको जागिर !
एजेन्सी । सुन्दा निकै अनौठो तथा अपत्यारिलो लाग्दछ तर यो साँचो खबर हो । बेलायतमा एक व्यक्तिले आफ्नो छोराको हेयर स्टाइलकै कारण आफ्नो हुँदाखाँदाको जागिरबाट हात धुनुपरेको छ । उत्तरपश्चिमी लण्डनका बासिन्दा ३७ वर्षीय क्रेग इमानुएलले छोराको नयाँ हेयरस्टाइलकै कारण जागिर छाड्नुपर्यो । क्रेगले आफ्ना छोरालाई नयाँ हेयर स्टाइलका साथ स्कुल पठाएका थिए । तर स्क...
भूकम्प पश्चात तटमा भेटिएको चिजले मच्चायो सनसनी
एलियन अनि यूएफओ (रहस्यमय उडनतस्तरी) देखिएका घटनामा समय-समयमा चर्चामा आइरहन्छन्। तापनि यसबारेमा अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रमाण भने भेटिएको छैन। तर हालै न्यूजील्याण्डको ओकल्याण्डको समुन्द्री किनारामा भेटिएको विशाल रहस्यमयी चीजले खलबली मच्चाएको छ। एलियनले प्रयोग गर्ने ‘टाइम क्याप्सुल’ हुनसक्ने भन्दै विभिन्न तर्कवितर्क गरिएको छ। न्यूजील्याण्डको मुरीवाई...
मान्छेको मासु खान्थे यी राष्ट्रपति !
एजेन्सी । संसारमा कयौं क्रुर शासक देखिएका छन् । तर, एउटा यस्तो शासक जसलाई मान्छे मानिदैन थियो । उनी मान्छेको मासु मन पराउँथे । सुन्दा डर लाग्ने यी राष्ट्रपति वारे कही जानौं युगांडाका तानाशाह ईदी अमिनलाई अहिलेसम्मकै क्रुर शासकको रुपमा मानिसहरू सम्झने गर्छन । राष्ट्रपतिको रुपमा करिव ८ वर्ष शासन गरेका यीनले जनतामा खुलेरै अत्याचार गरे । यतिमात्र हो...
मृत मानिस मात्र बस्ने संसारकै अनौठो ५ तारे होटल; आखिर के हो त कारण ? जानी राखौ
एजेन्सी। कसैको मृत्यु पश्चात लासलाई अन्तिम संस्कार दिईन्छ । तर एक यस्तो ठाउँ पनि छ जहाँ मरिसकेपछि मानिसलाई चिहानमा नभएर ५ तारे होटेलमा लगिन्छ । यस होटेलमा लासलाई यस्तो सेवा गरिन्छ जुन जिउदो मानिसलाई पनि गरिदैन । जान्नुहोस किन यो होटेल दुनियाभरमा प्रख्यात छ । लास्टेल कोर्प्से नामको यो ५ तारे होटेल जापानमा अवस्थित छ । तर यो होटेलमा जिउदो नभई मरेको ...
न खुट्टा न हात, यस्तो छ उनको आँट (पढ्नुहोस उनकाे चमात्कारिक कथा)
एजेन्सी / दुबै हात र दुबै खुट्टा नभएका ३३ वर्षीय ‘निक वुजकिक’ विश्वकै जानेमाने मोटिभेटर र लेखक मानिन्छन् । सन् १९८२ डिसम्बर ४ का दिन अष्ट्रलियामा जन्मेका निक वुजिकिकका जन्म देखि नै दुबै हात र दुबै खुट्टा छैनन् । खुट्टाको ठाउँमा स साना औंला छन् । करोडौंमा केही एक दुई मामला यस्ता पनि हुन्छन् । आमा बुवाले जब हात र खुट्टा नभएका बच्चा देखे उनीहरु धेरै ...
सुहागरातमा दुलाहालाई नै बेहोश बनाइ गरगहना सहित दुलही फरार भएपछि हंगामा
एजेन्सी। भारतको उत्तर प्रदेशस्थित गाजियाबादमा एक नववधूले अनौठो हर्कत गरेकी छिन् । सुहागरातमा दुलाहाले पिउने दूधमा निद्रा लाग्ने औषधी हालिदिएर बेहोश बनाई उनी घरमा रहेका सबै नगद र सुनचाँदी लिएर भागिन् । घटनापछि विवाहको बन्धनमा बाँधिएको युवक आफ्नो तोडिएको सपना लिएर प्रहरी चौकी पुगे । प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेर घटनामाथि अनुसन्धान चलाएको छ । पंकज नाम...